ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Fighting Game အဖြစ် Super Smash Bros. Ultimate စံချိန်တင် | Duwun
ဂိမ်းလောကမှာ မသိသူမရှိတဲ့ Nintendo ကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန် Super Smash Bros. Ultimate ဟာ ဂိမ်းထွက်ရှိပြီးတာ ၁ နှစ်တောင်မပြည့်သေးပေမယ့် ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Fighting Game အဖြစ် စံချိန်ချိုးလို့သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
Fighting Games ဆိုတာကတော့ ကစားသမားတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သတ်ကွင်းထဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ရတဲ့ ဂိမ်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat တို့ကတော့ သက်တမ်းအကြာဆုံးနဲ့ လူကြိုက်အများဆုံး Fighting ဂိမ်းတွေပါ။
မကြာခင်ကမှပဲ ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစံချိန်ချိုးခဲ့တဲ့ Fighting Game "Super Smash Bros. Ultimate" ဟာ ယူနစ်ပေါင်း ၁၅.၇၁ သန်းခန့် ရောင်းချခဲ့ရပါတယ်။ Nintendo Switch တစ်ခုတည်းအတွက်သာထွက်ရှိခဲ့ပေမယ့် စံချိန်တင်တဲ့အထိရောင်းချခဲ့ရတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကတော့ ကြောက်ခမန်းလိလိပါပဲ။
အရင်ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Fighting ဂိမ်းစံချိန်တင်ထားခဲ့တဲ့ ဂိမ်းကတော့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Street Fighter II ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Capcom ကဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ Street Fighter II ဟာ ယူနစ်ပေါင်း ၁၅.၅ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့ရပြီး ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Fighting Game စံချိန်ကို နှစ်အတော်ကြာ ထိန်းထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Super Smash Bros. Ultimate ချိုးခဲ့တဲ့စံချိန်တွေက ဒါတင်ပဲလားဆိုရင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Super Smash Bros. Ultimate ဟာ Super Mario Odyssey (၁၅.၅၈ သန်း)၊ The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild (၁၄.၅၄ သန်း) တို့ကိုကျော်ဖြတ်ပြီး Nintendo Switch ရဲ့ အရောင်းရဆုံးဂိမ်းစာရင်းထဲမှာ ဒုတိယနေရာကို ဝင်ရောက်ရယူခဲ့ပါတယ်။ သူ့အထက်မှာတော့ ၁၉ သန်းကျော်ရောင်းရထားတဲ့ Mario Kurt 8 Deluxe ပဲကျန်ပါတော့တယ်။
နောက်ထပ်စံချိန်တစ်ခုကတော့ ရက်သတ္တပတ် ၃ ပတ်အတွင်းအရောင်းရဆုံး Nintedo ဂိမ်းပါ။ Super Smash Bros. Ultimate ဟာ ထွက်ရှိပြီး ၃ ပတ်အတွင်းမှာ ယူနစ်ပေါင်း ၁၂ သန်းကျော် ရောင်းချခဲ့ရတဲ့အထိ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဂိမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Super Smash Bros. ဆိုတာ Nintendo ရဲ့နာမည်ကျော်ဂိမ်းစီးရီးဖြစ်ပြီး ဒီစီးရီးရဲ့ ပထမဦးဆုံး ဂိမ်းဟာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်ကတည်းက ထွက်ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Super Smash Bros. ဂိမ်းစီးရီးထဲမှာတော့ Super Smash Bros. (1999), Super Smash Bros. Melee (2001), Super Smash Bros. Brawl (2009), Super Smash Bros. for Nintendo 3DS and Wii U (2014) နဲ့ Super Smash Bros. Ultimate (2018) တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး Fighting Game အဖြစ် စံချိန်သစ်တင်ခဲ့တဲ့ Super Smash Bros. Ultimate ဟာ Nintendo Switch ရဲ့ Exclusive ဂိမ်းဖြစ်တာကြောင့် တခြား PC,Console,Mobile ပလက်ဖောင်းတွေမှာ ဆော့ကစားလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘဲ Switch တစ်ခုတည်းမှာသာ ဆော့ကစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။